Owina umklomelo weNobel uthi ubuntu buhloselwe ukuhlala emhlabeni kuze kube phakade - BGR - Thumela RELAY
Accueil » ISAYENSI UNobel laureate uthi ubuntu buhloselwe ukuhlala emhlabeni kuze kube phakade - BGR
Owina umklomelo weNobel uthi isintu senzelwe ukuhlala eMhlabeni kuze kube phakade - BGR
Eminyakeni emihlanu ezayo, abakwaNASA bahlela ukuthumela abantu enyangeni. Uma ngibheka phambili, i-NASA futhi ibeka isiteji sohambo olwenzelwe ukuthunyelwa eMars, futhi konke lokhu ukuhlola isikhala esijabulisayo kuholele ekutheni abantu abaningi bazibuze ukuthi sesidlulile isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba kudalwe abantu hlala komunye umhlaba.
UMichel Mayor, ososayensi, onqobile eMklomelweni kaNobel ku-physics, akathandi ukukhuluma kakhulu ngendoda eshiya uMhlaba ukuze isibhakabhaka sihlaza. Eqinisweni, engxoxweni yakamuva ne AFP Imeya ithe ayiboni indlela yokwenza amakhulukhulu umhlaba njengathi futhi kufanele sisebenzise izinsizakusebenza zethu ukuze iqhubeke iphilile kunokuphupha
Imeya ibeka izizathu zayo iphawula ukuthi ibanga eliphakathi kweplanethi yethu nezinhlelo zonozungezilanga eziseduze impela. Uqinisile, kunjalo, futhi ngisho nalezo zinto ezibonakala njengezingahleleleke ngokwezethu imibono zisesekude kakhulu ukuba siqiniseke.
Noma ngabe besazi ngokuqinisekile ukuthi iplanethi ingahlalwa muntu nokuthi abantu bangaphila ngokukhululeka nangokuphepha endaweni yayo, asinayo indlela yangempela yokufika lapho. Ibanga, isikhathi nokuvikeleka kuyizinto ezivimbayo, futhi ukusula impucuko yethu ukuze kuvunyelwe indawo entsha akuyona neze indlela ekude.
"Lawa maplanethi akude kakhulu. Ngisho esimweni esinethemba kakhulu seplanethi evelekayo engekho kude kakhulu, yisho iminyaka embalwa yokukhanya, okungekho okuningi, kungomakhelwane, isikhathi okufanele sihambe ngaso kucatshangelwe, ”kusho imeya I-AFP. . “Sikhuluma ngamakhulu ezigidi zezinsuku sisebenzisa izindlela esinazo namuhla. Kumele sinakekele iplanethi yethu, yinhle kakhulu futhi ihlala itholakala kahle. "
IMeya ikhathazekile ikakhulukazi ngombono wokuthi lapho abantu bewubhubhisa ngokuphelele uMhlaba, singamane siqhubekele phambili, sibize "ukuhlanya". [I-19659002] Isintu asinaso isikebhe sokuphila okwamanje, futhi kungenzeka singakaze sikwenze. Ubuchwepheshe bungasivumela ukuthi sihlole amanye umhlaba futhi mhlawumbe nezinye izinhlelo zonozungezilanga, kodwa mancane kakhulu amathuba okuba ubuntu buvele nje bapakishe futhi bahambe. Unalokho engqondweni, mhlawumbe kungcono kakhulu ukugcina umhlaba wethu okuwukuphela kokusebenza.
Umthombo wesithombe: Reid Wiseman / NASA
Lesi yisudi yesikhala esisha se-NASA esizofakwa yizazi zezinkanyezi enyangeni - BGR
I-Ivory Coast: Labo abafuna ukuthatha isikhundla sezepolitiki - JeuneAfrique.com
Ukuguqulwa kwe-CFA franc, iphrojekthi eyinkimbinkimbi yezomnotho kanye nezokwazisa - JeuneAfrique.com
Ngemuva kokubeletha, umama uhlungiswa enyakazisa ingane yakhe futhi eshaya intuthu ebusweni bayo - ISANTE PLUS MAG
I-headset yakamuva engenantambo ye-Cleer ihambisa amahora we-100 wokuzimela zasendle - BGR
UKarine Le Marchand uphatha abezindaba uCyril Hanouna: Uyamphendula
ABANTU & LIFESTYLE7,437
I-TECH & ITELECOM2,581